N'ogbe Chic Urban Yiri Akwa Cupro Fiber T-shirt Short Hoodie emepụta na ndị na-eweta ya | Yiwan
N'ala (mkpụmkpụ & ogologo ọkpa)
Chic Orange Cotton ngwakọta Waffle kpara Long Aka TS ...
Street Style karịrị akarị Short uwe Cotton Jersey Zi ...
Chic Designer Short uwe Cotton Jersey nkee warara Ts ...
Ndị nwoke Igbe n'akpa uwe Short uwe Cotton Jersey ...
Omenala Brand Men Long aka uwe Cotton Piqué Polo uwe elu
Ejiji Street Style Longline n'ígwé na Asymmetric ...
T-shirt Chic Velvet Tee Men Khaki Cotton Ngwakọta Velor
T-shirts ụmụ nwoke na-adịghị ahụkebe dabara adaba
Street Style Men Igbe n'akpa uwe ọkara ọkara zip Polo S ...
Omenala Plain White Cotton Ugboro abụọ uwe Long uwe ...
Ejiji ụmụ nwoke n'akpa uwe n'akpa uwe T-shirt Polo
T-shirts nke Ribbed Crewneck Cotton Jersey Boxy T-shirts
T-Shirt nke Raglan Long Sleeve Flame Cotton Jersey
Akpa Igbe Style Style Cotton Khaki Igbe
Chic Terrycloth Logo Appliqué Cotton Terry Sw ...
Street Style Loose Fit gabigara ókè Cotton ajị anụ ọsụsọ ...
Oge mgbụsị akwụkwọ ejiji ụmụ nwoke Tee Long uwe elu Waffle Henley
Chic Urban Wear kpara Cupro Fiber T-uwe mkpụmkpụ uwe nwere uwe
Akwa fechaa cupro akwa
Ihe mejupụtara: 100% cupro fiber
E depụtara nha niile na inch.
Agba ikpeazụ na -adabere n'ụdị akwa.
Dị ka ụzọ isi zute ọchịchọ onye ahịa, a na -arụ ọrụ anyị niile n'ụzọ kwekọrọ n'ụkpụrụ motto anyị "Elu dị elu, ọnụ ahịa asọmpi, ọrụ ngwa ngwa" maka China N'ogbe China nwere nsogbu French Terry Hoodies Custom Cotton Mens Hoodies, Anyị ji obi anyị niile. nabata ndị na-azụ ahịa gburugburu ụwa na-abịa ịbịa ebe nrụpụta anyị ma soro anyị rụkọọ ọrụ mmeri!
Hoodies zip-up zip, ngwaahịa anyị na-ebupu n'ụwa niile. Ndị ahịa anyị na-enwe afọ ojuju mgbe niile maka ezigbo ntụkwasị obi anyị, ọrụ ndị ahịa na ọnụ ahịa asọmpi. Ebumnuche anyị bụ "ịga n'ihu na-enweta iguzosi ike n'ihe gị site na ịrara mbọ anyị maka mmezi na ọrụ anyị mgbe niile iji hụ na afọ ojuju nke ndị ọrụ njedebe, ndị ahịa, ndị ọrụ, ndị na-ebubata ya na obodo ụwa niile anyị na-arụkọ ọrụ ọnụ".
Q1: Enwere m ike iji akwa ọzọ maka imewe m?
A1: Ee, nke ahụ ga -ekwe omume. Biko nye ndụmọdụ ihe masịrị gị.
Q2: Ị nwere ngwaahịa dị na ngwaahịa?
A2: N'ozuzu anyị enweghị ngwaahịa nke ụdị ọ bụla. Mana ị nwere ike lelee webụsaịtị anyị maka akụkụ ngwaahịa.
A3: T/T, Gram ego, nkwụnye ego 40% tupu oge eruo, 60% itule tupu ịtụ nnukwu.
Anyị na-anwa ịdị mma, na-akwado ndị ahịa ”, na-atụ anya ịbụ ndị otu na-arụkọ ọrụ ọnụ na ụlọ ọrụ maka ndị ọrụ, ndị na-ebubata ngwaahịa na ndị na-azụ ahịa, na-achọpụta uru bara uru na ịre ahịa mgbe niile maka Best-Selling China Lightweight Dry Fit Polyester Gym Zipper Hoodie, Anyị na-ele anya n'ihu iji guzobe gị na ndị otu ụlọ ọrụ azụmaahịa ogologo oge. A na -enwe ekele maka okwu gị na ndụmọdụ gị.
Nke gara aga: Style Style Winter Half Zip Pullover Polar Fleece Sweatshirt na akpa
Osote: Nnukwu Uwe Hooded Sweatshirt Ude Full Zip-elu hoodie
Ejiji Drop Jirinụ Cotton Teal French terry ...
Ụmụ nwoke na -adịghị ahụkebe dị mfe Organic Slub Cotton Hoodie
Street Style Cotton jumper Oversized Drop Shoul ...
Ejiji Street Style i papuas Men Crew Olu Pullo ...
Urban Sweatshirt Button-elu Flannel Checked Shir ...
Omenala 95 owu 5spandex ọgịrịga Knit Turtleneck S ...
Amụma nke akwa akwa 2021/2022
Agba dị mkpa karịsịa maka iyi. Agba ndị ama ama dị iche na afọ ọ bụla na oge ọ bụla. Mkpokọta agba nwere nka ga -ewetara echiche ejiji ọzọ. Pantone ewepụtala ụfọdụ ụdị ewu ewu n'oge ngosi ejiji ụbịa/mgbụsị akwụkwọ nke 2021/2022. N'ebe a, anyị bulitere agba 7 maka ọmụmaatụ. Ka anyị ...
Ọ nweghị ihe nwere ike ịgbanahụ mmetụta nke Covid-19, gụnyere mbupu, ọkachasị maka mbubata & mbupu mbupụ. Dị ka akụkọ kachasị ọhụrụ Aug 10, enwere otu ikpe achọtara na Ningbo Zhoushan Port, na -arụ ọrụ ebe a. Mgbe ahụ, a ga -akwụsị ọrụ niile n'ime akpa akwa. Ka ọ dị ugbu a, saịtị dị mkpa nwere ...
Ekike ụmụ nwanyị! Ụdị okporo ụzọ!
Oge eruola ịkọ ihe omume mkpokọta akwa ụmụ nwanyị nke oge opupu ihe ubi 2022-na ụdị n'okporo ụzọ-ga-eweta, mana ọ bụghị ogologo oge iche na ọ nwere ike bulie ebe ọ kwụsịrị n'oge ọrịa. Uwe ejiji ụmụ nwanyị nke oge opupu ihe ubi 2020 na -egosi ihe dị ka June 2019 hụrụ ka ụzọ ndị mepere emepe na -agbagharị n'ike mmụọ nsọ, site na…
Mgbe ihe nlele 3 gbasasịrị ike njupụta nke Nucleic acid, nsonaazụ gosiri na enweghị ikpe COVID-19 n'obodo Dongguan, Guandong. Ka ọ dị ugbu a ndị mmadụ nwere ọgwụ mgbochi. Ihe adịla mma, yabụ na echegbula onwe gị maka usoro nrụpụta uwe gị. Na anyị dị mma na -eme m ...
Ememe Afọ Ọhụrụ nke afọ 2022 na -abịa n'oge a, na -amalite site n'ihe dị ka 26th, Jan, 2022 ruo 10th, Feb, 2022. Ememe a dị ezigbo mkpa maka ndị China, maka na nke ahụ bụ ezumike ọdịnala maka ezinụlọ na -ezukọta ọnụ, nke bụ otu dị ka ezumike ekeresimesi na mba ọdịda anyanwụ. Nwoke ...
Jikọọ na akwụkwọ akụkọ anyị